Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Ka soo qaad inaad qorsheyneyso inaad booqato Midowga Yurub wakhti dhow. Haddii ay sidaa tahay, waxaa jira talooyin taxane ah iyo macluumaad safar muhiim ah oo kaa caawin doona inaad khibradaada ka dhigto mid aad u xiiso badan. Mid baa ka fikiri kara inuusan jiri karin wax weyn…
Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo Ku xeeran dabeecadda ugu quruxda badan, aan la taaban waqtiga, waa 10 magaalooyinka qadiimiga ah ee ugu quruxda badan adduunka oo dhan. Laga soo bilaabo Yurub ilaa magaalooyinka xiisaha leh ee Shiinaha, safarkan waxaa ka buuxi doona sheekooyin laga soo bilaabo waqtiyadii dhexe ilaa waqtiyadeenna. Gaadiidka tareenka ayaa ugu badan…